Ahụmahụ Semalt Ahụ Site Islamabad Na-akọwa Ihe Spam Blocker bụ
Onye na-egbochi spam bụ ngwá ọrụ dị irè iji zipu ozi ịntanetị achọghị. Usoro a na-egbochi spam a dị iche na mmemme nchịkọta spam ndị a na-ejikarị eme ihe ma gbochie ọtụtụ spam n'ime sekọnd. Iji onye na-egbochi spam, ị nwere ike igbochi onwe gị ịnakwere emails na-abaghị uru na spam. Onye na-egbochi spam na-egbochi 85% nke ozi ịntanetị a na-achọghị iji ruo igbe mbata, gụnyere nje na ozi efu. Ụfọdụ ndị na-egbochi spam nwere ike ihichapụ 99% nke spam n'ime sekọnd.
Sohail Sadiq, onye ọkachamara nke si Semalt , kọwakwuru ebe a gbasara otú ndị na-egbochi spam na-arụ ọrụ - how to get backlinks from high pr sites.
Ngwá ọrụ ngwanrọ spam na ngwaọrụ na-arụ ọrụ site na akaụntụ email nkesa ozi, nyochaa akaụntụ maka ozi ịntanetị spam. Ndị na-egbochi spam na-ehichapụ ma nje ma enyocha ozi-e na-enyo enyo ma nyere gị aka wepụ ihe oyiyi na ọdịnaya ndị okenye. Ọzọkwa, ozi ndị a na-ejighị n'aka na-adị mfe ichebe, gụnyere nnukwu akwụkwọ akụkọ na ozi-e nkwado. Ọ na-ewe omume ozugbo site n'ihichapụ ozi-e, ma a na-echekwa omume ndị a iji mepụta iwu ntinye ngbanwe.
Olee Atụmatụ Ị Kwesịrị Ịchọta na Blocker Spam?
Mgbe ị na-ahọrọ ndị na-egbochi spam ahụ, ị ​​ga-achọ mgbe niile maka mmemme ahụ nke kwekọrọ na ozi email gị karịa ndị ọzọ yiri nke ahụ. Ọzọkwa, ị ga-enyocha ihe ndị dịka nhịahụ nke nrụnye, ọkwa nke nchịkọta, na ụgwọ nke ihe omume spam..
Ụiche dị n'etiti Spam Filter na Spam Blocker
Ntanetị spam nwere ike ịhazi ozi ịntanetị akara dịka spam n'ime nchekwa ụfọdụ, ebe spam blocker nwere ike igbochi gị ịnweta ozi na ihe na-abaghị uru. Ọ pụtara na ọ dịghị mkpa ka i jiri oge na-ehichapụ ozi enyo enyo ka ha na-ehichapụ ya na ndị na-egbochi spam. Ọ bụ ya mere ndị webmasters na ndị ọchụnta ego na-anaghị eji amasịkarị ndị na-elekọta spammers.
Uru nke Ịwụnye Blocker Spam
Akwụnye ihe nchọgharị spam dị mfe iji wụnye, ọ dịghịkwa mkpa ịgbanwe oge ya ugboro ugboro. Ọzọkwa, ọ na-ahapụ gị ka ịdebe adreesị email dịnụ na-echekwa na-adịgide adịgide. Ka ọ na-ewepu spam ahụ, onye na-agba afa spam na-echekwa oge gị ma gbochie ịme ozi ịntanetị achọghị. I nwekwara ike belata ihe ize ndụ nke nje virus ma nwee ike inwe ọganihu dika onye ọchụnta ego.
Gịnị bụ Ahịa nke Spam Blocker?
Ọtụtụ ndị na-agba afa spam chọrọ ụgwọ ọnwa. Ọnụahịa ahụ dabere na nchedo, njirimara ya, na ihe onwunwe ya. Ná nkezi, onye na-agba afa spam ga-eri gị ihe si $ 3.00 ruo $ 25 kwa ọnwa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ngwanrọ na-enye nkwụnye n'efu iji mee ka ndị ọrụ na-ebudata ndị na-egbochi spam na-enweghị njirimara na nhọrọ. Ị nwere ike iji spam free spcker blocker maka iri na ise ruo ụbọchị iri atọ, mgbe ị ga-akwụ ụgwọ.
Gịnị Ka Ị Ga - achọ na Blocker Spam?
Ndị ọrụ ntanetị kachasị mma bụ ndị omenala. Otu n'ime atụmatụ ya bụ ike igbochi na igbochi ozi ịntanetị. Ọ bụrụ na ị họrọ onye na-agba afa spam na-ekwe nkwa igbochi ozi ịntanetị achọghị, ị meela nhọrọ ziri ezi. Jide n'aka na ọ na-emezu ihe ị chọrọ ma dabara ngwa na ọrụ ị na - eji.